Enwere m ike Naghachi faịlụ site emerụ SD Kaadị?
Naghachi Data si emerụ SD Kaadị na 3 Nzọụkwụ
1 Enwere m ike Naghachi faịlụ site emerụ SD Kaadị?
Hi, m SD kaadị na ekwentị m nke e dere ọtụtụ ezumike photos kwụsịrị ịrụ ọrụ dị nnọọ ugbu a. The kaadị bụ ide na ekwentị m na m na-gwara usoro ya. Ma m nwere ike ime ya ugbu a. M maara na kaadị na-emerụ na m mkpa ka naghachi data site na ya. Ị nwere ihe ọ bụla ezi echiche ma ọ bụ aro? Ekele.
E nwere ọtụtụ ihe n'ihi na gị kaadị nrụrụ aka, dị ka usoro njehie, virus ọrịa ma ọ bụ ọbụna na kaadị mebiri. Ọ gaghị ekwe omume iji naghachi data si rụrụ arụ SD kaadị ma ọ bụrụ kaadị gị na ahụ mebiri emebi. Ma emerụ SD kaadị data mgbake bụ ka ekwe omume ma ọ bụrụ na gị rụrụ arụ SD kaadị nwere ike ghọtara site na kọmputa na data na-adịghị overwritten.
E nwere ọtụtụ rụrụ arụ SD kaadị data mgbake omume na Internet. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ nhọrọ kasị mma n'ihi na ị na-agbake data si rụrụ arụ SD kaadị. Ya dị ike na-adịghị ize ndụ mgbake atụmatụ eme ka i nwee naghachi niile furu efu faịlụ site na rụrụ arụ SD kaadị, gụnyere videos, photos, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ faịlụ, wdg Ọ na-eme rụrụ arụ SD kaadị data mgbake ihe ala.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery naghachi faịlụ site na rụrụ arụ SD kaadị ugbu a!
2 Naghachi Data si emerụ SD Kaadị na 3 Nzọụkwụ
Tupu anyị amalite, i kwesịrị ime ka n'aka gị rụrụ arụ SD kaadị, ọ bụ ezie-akwụsị ịrụ ọrụ, ike ka a ghọtara dị ka a mbanye site tour kọmputa. Ugbu a ka na-amalite mgbake na Windows version nke usoro ihe omume, nke nwere yiri na-arụ ọrụ arụmọrụ na na na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite rụrụ arụ SD kaadị data mgbake
Jikọọ gị SD kaadị na gị na kọmputa na igba egbe Wondershare Data Recovery, ị ga-ahụ a mmalite Windows dị ka oyiyi n'okpuru.
I nwere ike ịgụ ntuziaka nke 3 nyere mgbake ụdịdị ke window. Naghachi data si rụrụ arụ SD kaadị, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode na-amalite.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị emerụ SD kaadị
Mgbe ahụ, gị emerụ SD kaadị ga-achọpụtara na-egosipụta. Ị nwere ike họrọ ya na window na pịa "Malite" ka scanning furu efu faịlụ na ya.
"Kwado Deep iṅomi" bụ ihe nhọrọ maka gị na-agbake data si a formatted SD kaadị.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na rụrụ arụ SD kaadị
All natara faịlụ gị emerụ SD kaadị a ga-emere na "Ụzọ" na "File Pịnye" edemede ke window mgbe scanning.
Ị nwere ike ele faịlụ aha ma ọ bụ preview oyiyi / akwụkwọ ego otú ọtụtụ nke furu efu faịlụ nwere ike natara site gị rụrụ arụ SD kaadị.
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji akara faịlụ ị na-aga naputa site na rụrụ arụ SD kaadị na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha azụ gị na kọmputa.
Windows 7 undelete: Olee otú undelete Files na Windows 7
3 Ụzọ imezi mberede Nhichapụ
Memorex Data Recovery: Olee naghachi Data si Memorex nchekwa na ngwaọrụ
SanDisk Iweghachite Software: Olee otú naghachi faịlụ site SanDisk
Olee otú Naghachi Lost QuickTime MOV & WMV Video Files
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Data si emerụ SD Kaadị